Kenya oo sheegtay inay dishay saraakiil iyo xubno ka tirsan Alshabaab – STAR FM SOMALIA
Kenya oo sheegtay inay dishay saraakiil iyo xubno ka tirsan Alshabaab
Saraakiil u hadashay dowlada Kenya ayaa sheegay inay dileen xubno ka tirsan Alshabaab, kadib howlgal ay ka sameeyeen deegaano ku yaala xuduuda Soomaaliya iyo Kenya.
Lt. Col. Paul Njuguna oo ah afhayeen u hadlay ciidamada Kenya ayaa sheegay in dagaalyahanada Alshabaab ku dileen baaritaan ay ka sameeyeen deegaanka Haluuqa oo dhawaan Alshabaab weerar ka geysteen.
Afhayeenka wuxuu sheegay in ciidamada Kenya ay dileen afar kamid ah dagaalyahanada Alshabaab, sidoo kale ay qabsadeen qoryo ay lahaayeen xubnaha Alshabaab ee ay dileen, sida uu hadalka u dhigay.
Dhinaca kale Lt. Col. Paul Njuguna wuxuu sheegay in ciidamada Kenya ay ku raadjoogaan xubno kale oo uu sheegay iney Alshabaab ka tirsan yihiin kana baxsadeen ciidamada Kenya.
Alshabaab ayaa tan iyo sanadkii 2011 weeraro kala duwan ka geystay gudaha dalka Kenya, waxaana ay jawaab kaga dhigeen joogitaanka ciidamada Kenya ee gudaha dalka Soomaaliya.
Koofur Galbeed oo ciidamo dheeraad ah geysay deegaanka Goof-gaduud
Duulimaadyadii garoonka diyaaradaha Muqdisho oo saaka hakad ku yimid, kaddib shaqo joojin